‘पियन’को भरमा गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराइँदै - सुदूर नेपाल
सुत्केरी हुने प्रक्रिया महिलाको जिवनको एक संबेदनशिल चरण हो । यसबेला दक्ष चिकित्सकको उचित निगरानी र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक पर्दछ । तर मुगुको एक स्वाथ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगीको भरमा गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराइँदै आएको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालीका वडा नं ७ मा रहेको पिना स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी पदमकला नेपालीले स्वास्थ्य चौकिमा सुत्केरी हुन आएका गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउदै आएकी हुन् । २०६९ सालदेखि वर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना भएसंगै कार्यालय सहयोगीमा भर्ना भएकी पदमकला नेपालीले विना तालीम र पढाई लेखाई अनुभवका आधारमा सुत्केरी गराउदै आएको स्वीकार गरेकी छन् । उनीे भन्छिन् -” गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य चौकि ल्याउछन्, त्यो बेला स्वास्थ्यकर्र्मी हुदैननन् हेरेर बस्न मिलेन बाध्य भएर सुत्केरी गराउदै आएको छु ।” उनी अगाडि थप्छिन्- “भगवान दाहिना भएर होला आज सम्म कुनै घटना घटेको छैन । “
मेरो काम सरसफाई गर्ने हो सुत्केरी गराउने होईन भन्ने गरेको भएपनि स्थानीयले सुत्केरी गराउन दवाब दिने गरेको उनी बताउँछिन् । यो आर्थिक बर्ष २०७५ /७६ मा पिना स्वास्थ्य चौकिमा ७१ जना गर्भवतीलार्ई सुत्केरी गराएको पिना स्वास्थ्य चौकिले जनाएको छ । जस मध्ये एक दर्जन भन्दा बढी गर्भवती महिलालाई आफु एक्लैले सुत्केरी गराएको नेपालीेको भनाई छ ।”कहिलेकाँहि चिकित्सक भएका बेला वहाँले गराउनुहुन्छ “उनी थप्छिन् । नेपालीले सुत्केरी मात्र गराउने नभई आवश्यक परेमा सुत्केरी ब्यथाले च्यापेका महिलालाई दुखाई कम गर्ने सुई समेत लगाउने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् -“यदि बिरामी धेरेनै छटपटाउने र साल झर्न ढिला भएमा अनुभवका आधारमा सिन्डो भन्ने सुई पनी लगाउने गरेको छु ।”
यता स्थानीयले भने सुत्केरीलाई स्वास्थ्य चौकीमा लग्दा चिकित्सक नभएपछि विश्वास र भगवानको भरोसा गर्दै कार्यालय सहयोगीलाई सुत्केरी गराउन दिने गरेको मुगु जिल्ला वडा नं ७ की स्थानीय महिला माया नेपालीले बताईन । कार्यालय सहयोगीले सुत्केरी गराउँदैै आएको तथ्य साँचो भएको स्विकार गदै स्थास्थ्य चौकी पिनाका ईन्चार्ज पदम बहादुर सजेवालले अनमी अभावका कारण यस्तो भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य नीतिअनुसार सुरक्षित सुत्केरी गराउने (एस. बि. ए.) तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीले मात्र सुत्केरी गराउने प्रावधान भएतापनि देशका दुरदराजमा आवश्यक चिकित्सक र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा बाध्य भएर कार्यालय सहयोगीको भरमा सुत्केरी गराइंदै आएको छ । न्युज २४
Previous Post: नेपाली कलाकार संघ मलेसियाको पहिलो बैठक आईतबार बस्दै
Next Post: सुमित पाठकको पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो)